Bogga ugu weyn Dib -u -eegista Caymiska Ethos 2022: Ma Xalaalbaa mise Waa Khiyaamo | Sida ay u shaqayso
Waa maxay Ethos oo dhan?
Sidee ayuu Ethos u shaqeeyaa?
Waa imisa qiimaha Ethos?
Ethos ma Xalaalbaa mise waa Fadeexad?
Ethos waa caymis nololeed oo ku siiya siyaasado loogu talagalay in lagu yareeyo saameynta maaliyadeed ee la xiriirta geerida qof caymis leh. Waxay u oggolaanaysaa dadka ay jecel yihiin qofka dhintay inay helaan waxoogaa faa'iidooyin ah oo uu helay qofka dhintay.
Maqaalkani waa Dib -u -eegis Caymis Ethos oo daacad ah oo loo qoray inuu ku siiyo aragti ku saabsan sida nidaamku u shaqeeyo. Qayb ka mid ah waxaad ka heli doonto maqaalkan ayaa kaa caawin doona inaad barato haddii nidaamku sharci yahay ama khiyaano yahay.
Si dhow ii raac markaan ku dhex marayo socodkan. Dhanka kale, waa kan shaxda nuxurka hoose ee dulmar guud ee waxa laga filayo maqaalkan.
Fikradda ka dambeysa Caymiska nolosha Ethos waa in ay fududahay in la isku qoro, kuu oggolaanaya inaad ku dhammaystirto tallaabooyinka 10 daqiiqo gudahood. Intaa waxaa dheer, ma jiraan baaritaanno caafimaad inta badan.
Iyada oo la adeegsanayo falanqaynta xogta caadada ah, Ethos waxay ku eegi doontaa xaaladdaada, iyo wakiilladeeda shatiyeysan (laakiin aan loo igman) waxay ogaan doonaan siyaasadda ay u badan tahay inay si fiican ugu shaqeyso xaaladdaada iyo heerka noloshaada.
Sababtoo ah Ethos gabi ahaanba waa onlayn, maahan inaad la kulanto wakiil, laakiin sidoo kale waxaad marin u yeelan kartaa siyaasadaha ay qoreen Assurity iyo RGA, oo leh qiimeyn sare.
Ethos waa caymis nololeed, sidaa darteed sida shirkadaha kale ee caymiska, waxay ku siineysaa siyaasado loogu talagalay in lagu yareeyo saameynta maaliyadeed ee la xiriirta geerida qof caymis leh.
Waxaad bixinaysaa khidmadaha waqti ka dib, oo haddii qofka caymisku uu dhinto ka hor dhammaadka siyaasadda, ka -faa'iideystayaashu waxay gunno ka helayaan shirkadda caymiska.
Waa kuwan qaar ka mid ah faahfaahinta caymiska nolosha Ethos:
Caddadka caymiska: $ 25,000 $ 10 milyan
Dhererka muddada: 10, 15, 20, ama 30 sano
Age: 18 ilaa 75 sano jir
Waxaad fiirin doontaa xaaladdaada, oo ay ku jirto inta aad u malaynayso inaad u baahan tahay si aad reerkaaga u siiso xasilooni dhaqaale markaad baxdo, oo aad dalbato qaddar siyaasadeed iyo muddada caymiska oo macno samaynaysa.
Tusaale ahaan, markii ugu horraysay ee aan dalbaday caymiska nolosha, waxaan haystay wiil yar oo reerkayagu lahaa deyn qumman. Aniga caymiska nolosha muddada siyaasaddu waxay ahayd 30 sano, maadaama ay taasi ku filnaan lahayd in aan arko wiilkayga oo soo maray kulliyad, qaddarkuna uu ku filnaa bixinta deyntii guriga iyo deymihii kale.
Maanta, markaan helayo xigasho cusub, waxaan diiradda saari doonaa xaqiiqda ah inaanan lahayn deynta, iyo in wiilkaygu aad uga weyn yahay. Siyaasadda nolosha muddada cusub waxay yeelan doontaa muddo gaaban waxaana laga yaabaa inay ku filnaato mas'uulka si uu u gaarsiiyo 18 jir dabadeedna u bixiyo iskuulkiisa.
Sida dhammaan caymiska nolosha, qiimaha Ethos lacagta caymiska waxay ku xiran tahay dhowr arrimood, oo ay ku jiraan da'daada hadda, inta caymis ee aad heleyso, iyo muddada ereyga. Caadooyinka hoos u dhigi kara cimrigaaga ayaa sidoo kale la tixgeliyaa marka la dejinayo kharashyada.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto sida caymiska nolosha ee la awoodi karo u noqon karo. Dhab ahaan, 44% millenniyadu waxay aad u qiimeeyaan qiimaha caymiska nolosha iyadoo shan jibaar ka badan caddadka kharashkeeda dhabta ah. Ethos wuxuu sheeganayaa inay suurtogal tahay in la helo ilaa $ 1 milyan oo caymiska nolosha ah ugu yaraan $ 1 maalintii.
Caymiska Ethos maaha khiyaamo! Waa mid aad u sharci ah oo dadkoo dhan baa sidoo kale ka faa'iiday.
Gabagabadii, waad iska diiwaangelin kartaa oo iska qori kartaa qorshe Caymiska Ethos. Nidaamku ma aha mid sharci ah oo la aamini karo waadna hubsan kartaa inaysan waxba ku dhici doonin lacagtaada.
Isku qor maanta si aad u hubiso dalabyadooda ugu wanaagsan.